Labo askari oo katirsan ciidanka Puntland oo lagu dilay weerar Al-Shabaab oo ka dhacay buuraha Galgala - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandLabo askari oo katirsan ciidanka Puntland oo lagu dilay weerar Al-Shabaab oo ka dhacay buuraha Galgala
Labo askari oo katirsan ciidanka Puntland oo lagu dilay weerar Al-Shabaab oo ka dhacay buuraha Galgala
September 24, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Sawirka: Ciidamo katirsan Puntland oo ku lugeynaya buuraha Galgala.
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamo katirsan Puntland ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay weerar Al-Shabaab oo ka dhacay buuraha Galgala maanta oo Axad ah.
Ilo-wareed dhanka ammaanka ah ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in labo askari oo katirsan ciidanka Puntland la dilay kadib markii dagaalyahano ka socda Al-Shabaab ay weerar ku qaadan goob ciidan oo kutaala buuraha Galgala ee gobolka Bari.
Tobonaan ciidamo ah oo Puntland ah ayaa lagu dilay buuraha Galgala intii u dhaxaysay June iyo September saddex weerar oo kala duwan gudahood oo ay qaadeen Al-Shabaab.
Al-Shabaab ayaa joogtay buuraha Galgala ee Puntland tan iyo sanadkii 2010, waxayna qaaday weeraro badan oo dhimasho leh oo ka dhan ah ciidanka Puntland.
November 15, 2019 Ciidamada Puntland oo iska difaacay weerar Al-Shabaab deegaanka Af-Urur
April 2, 2018 Ciidamadda PSF oo sheegay in afar maleeshiyo Al-Shabaab ah lagu dilay howlgal ka dhacay Buuraha Caalmadoow
September 1, 2017 Qarax ugu yaraan shan askari oo katirsan ciidamada Puntland ku dilay tuulada Af-urur
2 Puntland soldiers killed in Al-Shabab attack in Galgala hills
Hal qof oo ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Boosaaso
Boosaaso-(Puntland Mirror) Qarax ayaa maanta oo Talaado ah ka dhacay magaalada Boosaaso, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka. Qaraxa ayaa waxaa ku dhintay hal qof oo ahaa ninkii qaraxa waday, sida ay saraakiil katirsan ciidanka booliiska [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa sheegay in ay qaadeen duqeyntoodii ugu dhimashada badnayd ee ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab muddo ku dhow sanad, sida ay Mareykanku ku sheegeen bayaan maanta oo Talaado ah. Duqeynta oo [...]
Nairobi-(Puntland Mirror) Ciidamada Kenya ayaa ku dilay 57 dagaalyahan oo katirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab dagaal ka dhacay koonfurta Soomaaliya shalay oo Arbaco ahayd, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Kenya. Ciidamada Kenya oo ka hoos shaqeeya Howlgalka [...]